Hitachi ZX690LCR-7 & Oke igwe - Komatu si Sumo Dozer | ACE igwe
Hitachi ZX690LCR-7 & Oke igwe - Komatu's Sumo Dozer
Hitachi ZX690LCR-7 & Oke igwe - Komatu si Sumo Dozer
Na site na mmepe nke igwe na igwe ihe owuwu, enwere ọtụtụ ngwaahịa ndị dabara maka ọnọdụ dị iche iche emeela, ma lee akụkọ kachasị ọhụrụ banyere igwe ahụ site na Earthmovers.
Onye Ike - Hitachi ZX690LCR-7
Eoghan Daly na-eleta ihe ekwenyere na ọ bụ nke mbụ Dash 7 nke Hitachi Construction's 690LCR excavator ịbanye na ọrụ na Europe, na-arụ ọrụ na Live Work Grow na saịtị Central Park na Dublin.
Igwe ihe ọ orangeụ brightụ na-egbuke egbuke bụ nke Shannon Valley Group nwere ma jiri ya rụọ ọrụ site na nrịba nke 5 nke ọkụ na-eweta 348kW na 2,050Nm nke torque na 1,300rpm. N'iji iri asaa na asaa nke asaa na nha nke ihe omimi, 690LCR gosipụtara irè ya na imebi granite siri ike ya na Rammer C130 na Epiroc hydraulic hama Mgbakwụnye.
Onye na-eme ọfụma Tom Reilly gwara Eoghan, “Hitachis abụla ezigbo igwe ọrụ na Dash 7 ọhụụ a ka mma. Dị ka oge niile, ọ nwere nnukwu njikwa njikwa na ọ dị ezigbo nro na ndị levers kwa. ”
Gụkwuo banyere Hitachi ZX690LCR-7 na Shannon's ọrụ Dublin na Earthmovers Magazine.
Oke igwe - Komatu si Sumo Dozer
Na MAGAZINE nke November 2020 (malitere October 2), David Wylie tụlere nsụgharị ọhụrụ nke Komatsu Europe nke 112-tonne D475A-8, onye na-akụ ọkpọ ụwa niile, na-arụ ọrụ na Narva quarry na Estonia.
Iji ruo ebe ahụ, ebufere igwe ọrụ a na ụlọ ọrụ Komaka nke Osaka n'akụkụ ya gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Zeebrugge na Belgium. A na-ebugharị ihe ndị ahụ na 2,300km na gwongworo na Komatsu's Baltem As dealer na Estonia, ebe agbakọtara ya kpamkpam na ogbako ahụ.
Dash 8 nke D475A kwadoro site na engine nke Stage 5 na-emepụta 934hp na-aga n'ihu na 1,040hp na ntụgharị. Na ya sọrọ tilt U agụba na nnukwu ripper, mbipute nke nọchiri ebe a na-atụle onye na-agbanye 115 tọn!
Post oge: Ọkt-30-2020